Sida loo wanaajiyo Windows 10 inuu si fiican u shaqeeyo | Wararka Gadget
Waxaad rabtaa tayaynta Windows 10? Waa noocii ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka caanka ah ee ay soo saartay shirkadda Microsoft isla markaana loo sii daayo suuqa. Waqti ka dib, waxay ku guuleysatay inay isu muujiso inay tahay nidaamka labaad ee ugu adeegsiga badan adduunka, kaliya waxaa dhaafay Windows 7, oo sii wadaya taageerada iyo kalsoonida tiro badan oo isticmaaleyaal ah, laakiin gaar ahaan ku dhowaad dhammaan qaybaha ganacsiga., Aad iyo aad ka cagajiidayo inuu badalo markasta.
Astaamaheeda, xulashooyinka ay na siiso iyo howlaha la heli karo ayaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha Windows 10 ka dhigay mid ka mid ah nidaamyada hawlgal ee ugu caansan adduunka. Dhinaca taban, waxaan sii wadeynaa inaan markale helno gaabis xad dhaaf ah mararka qaarkood. Inaad isku daydo inaad xalliso maanta ayaan kuu sheegaynaa sida loo wanaajiyo Windows 10 inuu si fiican u shaqeeyo.
Ugu horreyntii, waa inaan kuu sheegno in khiyaamadaani ay wax badan kaa caawin doonaan tiro badan oo munaasabado ah, laakiin taasi shaki la'aan maahan inay yihiin wax aan khaldami karin, tusaale ahaan haddii aad haysato kumbuyuutar aad u duugoobay. Xitaa wax kasta oo aad qabato qaar ka mid ah waxyaabaha aan arki doonno marka xigta si aan u xoojino Windows 10, waa inay ku siiyaan gacan yar si aad uga dhigto kombiyuutarkaaga Windows 10 inuu waxyar ka fiicnaado oo aad xoogaa xawaare hesho.
1 Ha dhigin wax barnaamijyo ah oo laga bilaabo Windows 10
2 Cortana, mar dambe uma baahni
3 Dib u bilaabiddu waxay noqon kartaa xalka dhibaatooyinkaaga
4 Naqshadaynta Windows 10; dhibaato dad badan
5 Windows 10 Quick Start waxay noqon kartaa dhibaato
6 Ka dhig isku xirnaantaada mid gaar ah oo ha la wadaagin cidna
7 Kordhi Windows 10 oo socda
Ha dhigin wax barnaamijyo ah oo laga bilaabo Windows 10
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee inta badan isticmaalayaashu badanaa leeyihiin waa taas kumbuyuutarkayagu wuxuu qaadanayaa daa'in dhab ah inuu bilaabo. Dhibaatadan inta badan kiisaska waxaa loo aaneeyaa nidaamka qalliinka, xaaladdan oo kale Windows 10, laakiin wax yar ayey ku leedahay nidaamka qalliinka markii aan u qaabeynnay barnaamijyo kale oo dersin ah inay isku mar bilaabaan.
Waa sidaas marar badan kama war qabno barnaamijyada tirada badan ee bilaabmaya markasta oo aan kumbuyuutarka bilowno, badankoodna badanaa uma baahnin. Si loo hubiyo barnaamijyada si wada jir ah loogu bilaabay nidaamka qalliinka, iyo in la awoodo in la baabi'iyo ikhtiyaarkan, waa inaan ku riixnaa badhanka midig ee jiirka ee ku yaal astaamaha bilowga ee Windows 10. Maamulaha Hawsha, iyo adigoo riixaya Home tab waa inaad aragtaa sawir la mid ah kan hoose ka muuqda;
Liiska waxaan ka helnaa dhammaan barnaamijyada iyo habsami u socodka isla waqtigaas ka bilaabanaya Windows 10, na ogeysiinaya saameynta ay ku leeyihiin nidaamka bilowga. Si aad u joojiso dhammaan barnaamijyada aadan u arkin inay lagama maarmaan tahay, illaa ay si isku mid ah u billaabato mar kasta oo aad shiddo kumbuyuutarkaaga, waa inaad calaamadeeysaa oo aad gujisaa badhanka naafada. Wax dhibaato ah malahan hadaad joojiso kuwa aad rabto maadama aad awoodid waqti kasta oo kale.
Cortana, mar dambe uma baahni
Cortana Shaki kuma jiro mid ka mid ah xiddigaha waaweyn ee Windows 10, laakiin isla waqtigaas kaaliyaha dalwaddu wuxuu cunaa qadar badan oo kheyraad ah, gaar ahaan kumbuyuutarro xoogaa duug ah, sidaa darteed waxaa aad muhiim u ah inaad dib u eegto qodobkaan haddii PC-gaagu shaqeynayo Kaliya qalabka oo aad rabto inaad ku hagaajiso Windows 10 sida ugu macquulsan.
Intaas waxaa sii dheer, kaaliyaha ayaa weli aad uga fog waxa ay umuuqatay inay ahaan laheyd markii hore iyo inbadan iyo in kabadan ayaa go aansanaya ka jooji si aad isaga ilaaliso carqaladeynta dhibta leh iyo waliba keydinta kheyraadka.
Si loo joojiyo Cortana, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad tagto kaaliyaha meeshiisa isla markaana macsalaameyso weligiis, ama ugu yaraan daqiiqad Waana waqti kasta oo aad dib u hawlgelin karto oo aad u adeegsan karto inuu noqdo wehelkaaga safarka ah ee aaminka ah inta aad isticmaaleyso Windows 10.
Dib u bilaabiddu waxay noqon kartaa xalka dhibaatooyinkaaga
Waxay u muuqan kartaa doqon, laakiin kombiyuutarka oo laga tagayo maalmo, si fudud loo joojinayo ama loo beddelayo dadka isticmaala si aan qofna u heli karin fadhigeena, wuxuu aakhirka noqon karaa dhibaato gaabis daran. Waana taas marna ma damin qalabka, xusuusta la isticmaalay gabi ahaanba laguma sii deyn karo waxa loola jeedo. Haddii aan sidoo kale u isticmaalno, tusaale, ciyaar leh muuqaallo tayo sare leh, oo adeegsanaya xaddiga xusuusta badan, dhibaatadu way ka sii weynaan kartaa.
Marka dib loo bilaabo waxaan ku dhammeyn karnaa dhibaatooyinkaas oo dhan hal istaroog, oo ka dhig kombuyuutarradeena dhamaan xusuusta la heli karo mar labaad, kuna soo noqnoqoshada wax walba oo ku shaqeeya xawaare caadi ama ka yar.
Waxaan rajeyneynaa maalin maalmaha ka mid ah inaan sii haysan karno kumbuyuutarkeena Windows 10 maalmo ama usbuucyo, laakiin hada taladeenu waa hadii aad rabto inaad tan sameyso, dib u bilow ugu yaraan dhowrkii maalmoodba mar si aad uga fogaato inaad ku dhamaato xusuusta oo aad u xanuunsato nidaam gaabis ah oo ku dambayn kara adiga oo kaa dhigaya inaad quusato.
Naqshadaynta Windows 10; dhibaato dad badan
Markii uu Windows 10 suuqa soo galay, waxay sidaa ku sameysay iyadoo ay ka go'an tahay naqshadeynta iyo in lagu kala sooco iyada oo loo marayo isbeddellada bilicsanaanta marka loo eego kuwii ka horreeyay. Shaki la'aan tani waxay lahayd saameyn weyn oo togan, in kasta oo isla waqtigaas ay dhaawacday dadka isticmaala, gaar ahaan kuwa haysta qalab aad u duug ah. Taasi waa tusaale ahaan Dhamaan animations-ka uu nidaamka cusub ee hawlgalku haysto wuxuu qaataa qadar aad u fara badan oo khayraad ah, taas oo inbadan oo inaga mid ahi ubaahantahay waxyaabo kale.
Qaybta wanaagsan waa in animations-yadaas la demin karo wakhti kasta, adigoo gujinaya batoonka midig ee badhanka Windows Start, iyo helitaanka Nidaamka. Marka aan halkaa tagno waa inaan marinaa Qaabeynta Advanceday daaqadda soo muuqan doonta xulashada xulashooyinka horumarsan. Gudaha qaybta Waxqabadka waa inaan helnaa qaabeynta iyo gudahood Fursadaha waxqabadka waxaan heli doonaa ikhtiyaarka ah Saamaynta muuqaalka halkaas oo aan ku joojin karno animations-ka Windows 10 iyo dhinacyada kale ee la xiriira naqshadeynta.
Maskaxda ku hay in markay tahay in wax laga beddelo naqshadda Windows 10, waxna weligood u ekaan maayaan waxaad isticmaaleysay, markaa ha argagixin oo ula dhaqan sida ugu dhaqsaha badan.
Windows 10 Quick Start waxay noqon kartaa dhibaato
Mid ka mid ah riwaayadaha cusub ee ay Windows 10 la timid ayaa ah Bilow deg deg ah, taas oo loo malaynayo inay u oggolaanayso nidaamka hawlgalka inuu si dhakhso leh u bilowdo, in kasta oo mararka qaarkood uu u shaqeeyo si gebi ahaanba ka soo horjeed ah, oo dhaliya dhibaatooyin ka badan dheefaha.
Waa sidaas mararka qaar noocan ah bilowga ahi wuxuu gaabin doonaa bilowga Windows 10, isagoo abuuraya dhibaato. Dabcan, xallinteeda waa wax iska fudud maadaama ay tahay inaan marinno Awoodaha Awooda oo aan raadino ikhtiyaarka Dooro habdhaqanka badhanka Bilowga / Bilawga iyo faa iidada cusub guji Beddel qaabeynta aan la heli karin. Hadda waad arki kartaa shaqada 'Start Start' oo waad dejineysaa haddii aad firfircoonaan laheyd waxayna ku siin doontaa dhibaatooyin ka badan faa'iidooyinka, sidaas darteed aad ayey muhiim u tahay inaad dib u eegto doorashadan si aad ugu hagaajiso Windows 10 ugu badnaan.
Haddii aadan heli karin ikhtiyaarkan, ha ka welwelin maadaama aysan taageerin kombiyuutarrada oo dhan, inkasta oo aad leedahay Windows 10 kii ugu dambeeyay ee cusbooneysiiyay.
Ka dhig isku xirnaantaada mid gaar ah oo ha la wadaagin cidna
Tan iyo markii la aasaasay dhawr sano ka hor, Internetku wuxuu ku saleysan yahay mabda’a wadaagga macluumaadka, laakiin Windows 10, oo gacanta ku haya Microsoft, ayaa tan gaarsiinaysa heer in badan oo naga mid ah ay faraha ka siibtaan. Waana taas Nidaamka cusbooneysiinta ee nidaamka cusub ee hawlgalka ayaa kaa dhigi kara inaad kala soo baxdo waxyaabaha kaliya ma aha shabakadda shabakadaha laakiin kombiyuutarada kale, kombiyuutarkaaga u beddelaya server si loo soo dejiyo kuwa kale.
Tani waxay badanaa keentaa isku xirnaanshaheena internetka inuu gaabis noqdo, taasoo naga dhigeysa inaan aamino in kumbuyuutarradeena uu gaboobayo ama uu buuxsamayo.
Si aan wax yar uga wanaajinno Windows 10 oo aad uga dhigto isku xirnaantaada mid gaar ah oo aadan cidna la wadaagin waa inaan tagnaa Windows 10 Settings oo aan doorannaa Cusboonaysiinta iyo Amniga ikhtiyaariga ah, ka dibna Ikhtiyaarrada Horukacsan, oo ugu dambeyn guji Xullo sida aad u rabto cusbooneysiinta in loo gaarsiiyo. Hal mar halkan waa inaad barkinta ka dhigtaa ikhtiyaarka Cusbooneysiinta wax ka badan hal meel.
Kordhi Windows 10 oo socda
Tan iyo markii shirkadda fadhigeedu yahay Redmond ay soo saartay noocii ugu horreeyay ee Windows, waxay caddeysay ujeedkeeda ah inay daryeesho oo ay daryeesho dadka isticmaala, illaa heer Windows 10 ay ugu shaqeyso si iska caadi ah heerka isticmaalka iyo caafimaadka guud ee kombiyuutarkaagu yahay ka-faa'iideystayaasha waaweyn.
Si kastaba ha noqotee tani waxay dhibaato ku noqon kartaa isticmaaleyaal badan, sidaas darteed ikhtiyaar wanaagsan oo lagu helo xawaare iyo waxqabad waa inaan dhignaa Windows 10 inay ku shaqeyso waxqabad buuxa. Si tan loo sameeyo, waa inaad midig-gujisaa Windows 10 Start si aad uhesho xulashooyinka Awoodda. Sida ku cad sawirka soo socda, halkaas waxaad ka dooran kartaa qorshe dheeraad ah kooxdaada.
Miyaad ku guuleysatay inaad hagaajiso Windows 10 inay si fiican u shaqeyso iyada oo ay ugu wacan tahay talobixinteena?. Noosheeg booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama shabakadaha bulshada ee aan kujirno. Sidoo kale haddii aan ognahay tilmaamo kale oo dheeri ah oo lagu hagaajinayo nidaamka cusub ee Windows 10, nala soo socodsii, haddii ay shaqeyso waxaan ballaarin doonnaa liiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Tayadoodii Windows 10
Boqortooyada Midowday (UK) waxay bilaabi doontaa inay qodato waababka taleefannada ee quraafaadka ah
"Soo Qaadista Degdegga ah", ama sida looga soo iibsado iibsigaaga shirkadda Amazon kaliya 2 daqiiqo gudahood